Nkọwapụta --lọ ọrụ - China Zhenyuan Steel Structure Engineering Co., Ltd.
China Zhenyuan Steel Structure Engineering Co., Ltd. bụ ọkachamara ígwè Ọdịdị ngo ngo tụnyere imewe, rụpụta na echichi.
E hiwere ụlọ ọrụ na July 2006, nke a na-akpọbu Kunming Hongli Architectural Design Studio. Site na mmụba nke ụlọ ọrụ studio, o jirila nke nta nke nta mepee azụmaahịa ya na ntinye saịtị. Kemgbe 2015, o jiri nwayọ nwayọ mepee azụmaahịa ya na ụlọ injinịa wee gbanwee ya na ụlọ ọrụ injinịa ígwè. Nhazi, nhazi na ntinye echichi nke ụlọ ọrụ ahụ gụnyere: ụlọ oriri na ọ ,ụ officeụ, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, nchekwa oyi, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, obodo, ama egwuregwu na ụlọ ndị ọzọ. E depụtara ngalaba ndị ọrụ aka dị ka ngalaba isi ụlọ ọrụ ebe ọ bụ na e guzobere ya. Ọ dịkarịa ala mmadụ 3 (gụnyere onye iwu ahụ) na ngalaba a nwere ahụmahụ 3-5 afọ nke imepụta ihe na ụlọ akwụkwọ a haziri ahazi ma ha niile nwere usoro ụlọ akwụkwọ. Ruo ihe karịrị afọ iri, ụlọ ọrụ ahụ haziri ụkpụrụ nke ihe dịka 800,000m2, na afọ ise, ebe a na-ewu ihe dị ka 280,000m2.
Companylọ ọrụ ahụ etinyela nchekwa, nchekwa injinia na mmecha ya oge niile dịka oge ewu ya na mbu. Ahịa-nke mbụ bụ ụlọ ọrụ bụ isi ụkpụrụ. Mepụta injinịa dị mma bụ ngwaike iji zụlite ahịa. N'ịgbaso echiche a, ụlọ ọrụ ahụ enwetawo nkwado siri ike na mmata sitere n'aka ndị nwere nghọta n'akụkụ niile nke ndụ.
Kemgbe e guzobere ụlọ ọrụ ahụ, ọrụ ụlọ ọrụ injinia ụlọ ọrụ na nkwado teknụzụ agbasala mpaghara niile na mba ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia. N’ịtụle ogologo oge mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ, nkwado teknụzụ na iwu ihe owuwu, anyị ga-eme atụmatụ mpaghara sara mbara ma chọọ mmekọrịta ọzọ na mba niile yana “Belt and Road” dịka isi.
Company'slọ ọrụ ahụ aha ọma, ezigbo mma injinịa na ọrụ dị elu emeriwo otuto dị ukwuu site na ụdị ndụ niile ma mezie ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ mara mma.
Isi ụlọ ọrụ:
Steel Ọdịdị efere na ngalaba ígwè nhazi bases: Tianjin na Yunnan, China
Azụmaahịa ụlọ ọrụ
Site na mmụba nke azụmahịa, China Zhenyuan Steel Structure Engineering Co., Ltd. ejiri nwayọ nwayọ banye n'ọhịa. N'ime afọ atọ gara aga, ọrụ iwu ihe owuwu ebe ahụ bụ ihe dịka square mita 90000, na mpempe akwụkwọ mpụta mpụga yana nkwado nkwado bụ ihe dị ka square mita 260000.